Budata 1701 USS Ndenye Ihe ozo 2.0 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 16 339
Ebe a bụ ma ama ohere ụgbọ mmiri Enterprise nke-isi Kirk, na ebubo a ozi nke interstellar ngagharị afọ ise.
FSX / P3D - NCC-1701 USS ENTERPRISE - Star mee njem ahụ - Alternate Adị (2009) - V2.0
The emelitere version NCC-1701 USS Enterprise. Full mkpọ gụnyere emelitere nlereanya, VC, textures na ụgbọ elu tunning. Akwa mkpebi ndịna-emeputa, animated ọnụ ụzọ na engines .. Model mere n'okpuru FSDS site RicardoPJr .Read ndị readme faịlụ maka ozi ndị ọzọ. Nke a ohere ụgbọ mmiri bụ ike adaa na oké osimiri!
Full n'ime ime na 3D
Onye edemede: RicardoPJr